Umphakathi usakholelwa kwi-ANC - Kodwa | News24
Umphakathi usakholelwa kwi-ANC - Kodwa
Johannesburg - Iqembu elibusayo eNingizimu Afrika i-African National Congress lamukele imiphumela yokhetho lokuchibiyela njengoba liveze lokhu kusho ngokusobala ukuthi umphakathi usakholelwa ebuholini balo.
“Ukuzinikela kwethu ekusebenzeleni umphakathi, kusho ngokusobala ukuthi umphakathi usakholelwa ebuholoni be-ANC futhi sisahamba phambili ekubuseni izwe.
Lokhu kucaciswe yimiphumela yokhetho lokuchibiyela lwangoLwesithathu,” kusho okhulumela leli qembu uZizi Kodwa kwisitatimende.
OLUNYE UDABA:Kuboshwe abasolwa ababili ngolwasehostela eMlazi
I-ANC ibingenele ukhetho lokuchibiyela ezifundazweni ezinhlanu i-Western Cape, Eastern Cape, Limpopo, North West neKwaZulu Natal kanti inqobe amawadi angu-7 kwangu-10.
“Kumawadi angu-7 esiwanqobile sikwazile ukugudluza i-DA esikhundleni endaweni yaseMatzikama (Vrendendall) eWestern Cape.
Lokhu kusibeka endaweni enhle okhethweni lohulumeni basekhaya ngonyaka ozayo. Sibonga kakhulu abantu baseMzanzi ngokuqhubeka nokukhombisa ukubethemba ubuholi be-ANC,” kusho uKodwa.